FAQs - Guangdong ALUDS Lighting Industrial Co., Ltd.
Ma waxaad tahay warshadda tooska ah?
Guangdong ALUDS Lighting Industrial Co., Ltd waxaa la aasaasay 2017 oo ku yaala Jiangmen, isdhexgalka wax soo saarka, Cilmi-baarista iyo Horumarinta, Suuqgeynta iyo iibinta iyo adeegyada alaabta.Sannado badan oo horumarineed ka dib, hadda waxaan haynaa in ka badan 200 oo shaqaale ah, 10 injineero khibrad leh, oo ka kooban waaxda naqshadaynta indhaha ee madax-bannaan iyo waaxda naqshadaynta nalalka.
Waa maxay alaabtaada ugu muhiimsan?
Alaabadayada ugu muhiimsan waa nalalka dhibcaha hogaanka ah, nalalka laydhka ah, nalalka laydhka ee LED, nalalka saqafka ee hogaanka.....
Guud ahaan, waxaan ku dallaci doonaa kharashka muunada.Waa la soo celin doonaa marka aad dalabka caadiga ah dhigto.
Waxaad lacagta ku bixin kartaa akoonkeena bangiga T/T:
Hore u dhig dhigaalka, ka dibna dheelitirka ka hor inta aan la dhoofin.
Alaabooyin kala duwan ayaa leh MOQ kala duwan.Waxay ku salaysan tahay kaydka alaabta, shuruudahaaga faahfaahsan.....ALUDS Lighting waxay isku dayi doontaa dadaalka ugu fiican si ay u daboosho baahiyahaaga.
3 sano ama 5 sano dammaanad waxay kuxirantahay waqtiga dammaanadda kala duwan ee darawalada LED-ka.
Shaybaarada, wakhtiga rasaastu waa ilaa 3-7 maalmood.Wax soo saarka tirada badan, wakhtiga hogaanka waa 15-25 maalmood ka dib markii la helo lacag-bixinta dhigaalka.Waqtiyada hogaanka waxay noqdaan kuwo wax ku ool ah marka aan helnay deebaajigaaga, waxaanan haysanaa ogolaanshahaada ugu dambeeya ee alaabtaada.Haddii wakhtiyada hogaanka aanu ku shaqaynayn wakhtigaaga kama dambaysta ah, fadlan nala gudub shuruudahaaga.Dhammaan kiisaska waxaan isku dayi doonaa inaan daboolno baahiyahaaga.Inta badan kiisaska waan awoodnaa inaan sidaas sameyno.